Forum serasera malagasy Tsiaro - Dinika forum.serasera.org
Fitohizan'ny hafatra : Tsiaro
Felantsoa14 - 12/07/2018 03:43
Tsaroako 5 taona androany no nanapahako hevitra fa hajanona ny amintsika.
Fitiavana tsy hay izay hiafarana, mety hanimba, mety ho tsara.
Herintaona teo ho eo talohan'io
nifankahita voalohany isika. Ianao mpanjifa moa izaho mpivarotra. Mikarakara ny vokatra harosoko ho an'ny mpanjifa aho no nahazo rendez-vous tamiko ianao. Mazava ho azy fa nifanakalo carte de visite isika
Teo am-pisarahana t@ io andro voalohany io nahazo doka avy taminao aho mikasika ny fahaizako mandray olona. Afaka minitra vitsy dia nahazo SMS aho nandoka sy nambabo. Noezahiko tsy noraharahiana daholo izany satria toa efa mahazatra ahy teo @ asako izany drague isan-karazany izany.
Herinandro taorian'izay dia mbola nifanao fotoana indray isika @ vokatra horaisinao avy aty amin'ny orinasanay. Tsy ianao irery no teo fa niaraka t@ mpiara-miombon'antoka taminao ianao. Ity farany no tena niresaka fa ianao kosa tsikaritro tsy niala tety amiko ny masonao.
Nony nisaraka teo indray dia nofihininao mafy ny tanako sady nibanjina ahy ny masonao. Mbola noraisiko toy ny mpanjifa rehetra ianao hatreo.
Isaky ny avy mankao am-piasana ianao dia mahazo ilay karazana SMS mandoka sy mambabo avy aminao aho. Tsy nisy SMS niverina na iray aza. Indrisy anefa fa tsy notehiriziko izany noho ny antony efa fantatrao mikasika ny situation-ko sy ny anao koa. Ny anaranao aza dia nataoko surnom nony farany tato anaty phone fa tsy ny tena anaranao.
Nandeha ny volana sy ny taona. Nanomboka sahy nanasa ahy hiara-misakafo ianao. nolaviko ny fanasanao voalohany satria efa prévu hiara-hisakafo t@ mpiara-miasa aho ka nandainga taminao hoe efa manana sakafo sady be rdv @ mpanjifa hafa.
Indray atoandro, voalohandohan'ny volana janoary, nandrasanao tampoka lavidavitra ny fiasako tao anaty fiara aho raha nikasa handeha hividy sakafo teo @ fivarotana tsy lavitra teo. Teo ianao mbola nanasa ahy hisakafo indray, tsy hitako izay notenenina fa dia nanaiky. Niala lavidavitra teo isika nandeha restaurant iray. Vitsivitsy olona tao kanefa dia tsara na ny sakafo na ny resaka satria dia mbola nampianao ihany ireo teny mambabo izay toa nandona ahy hatrany anaty. Novakianao tamiko ny fitiavanao ahy na dia teo aza ny situation misy antsika izay samy efa manana ny vadiny avy.
Tsy hitako izay hambara fa ny tarehiko no boramena be. Notohizanao oroka teo @ molotro izany ary nahagaga fa tsy nanda aho fa vao mainka aza namaly, nitohy segondra maro izany oroka izany nifandraisan'ny lelantsika. Notohizanao ny fanasanao ny hiara-hivoaka ny zoma alina manaraka an'io. Nolaviko izany noho ny tsy fetezan'izany satria ahoana moa no hahafahako miteny @ vadiko hoe handeha hivoaka aho ? satria matetika raha mivoaka aho dia olona fantany daholo no hiarahako (mpiara-mpiasa amiko izay namany ny ankabeazany, iraitam-po na olona hafa ary matetika izaho miteny aminy mba haka ahy rehefa mody raha sendra misy an'izany, fa matetika koa anefa ny vadiko dia antsoin'ireo namako hiaraka aminay)
Nanomboka teo dia indraimandeha isan-kerinandro farafahakeliny ianao tonga mamangy ahy tao am-piasana tsy maka RDV akory fa juste mamangy dia miresaka kely dia lasa, avy eo mitohy SMS ny resaka.
Indray atoandro, mahagaga fa toa fantatrao ny andro tsy maha-be RDV ahy, notsenainao tampoka teo am-piasana indray aho nasainao hisakafo. Vao niditra tao anaty fiara aho dia gaga fa efa nisy sakafo tao, hamburger (izay tena ankafiziko) sy zava-pisotro, sns...
Noteneninao aho hoe tsy te-hiverina restaurant fa mba te-hitokana miaraka amiko kanefa koa tsy ao anaty fiara satria mafana be ny andro. Mahimahina aho @ ilay teninao nefa toa tsy natahotra fa toa vao mainka te-hahalala ny tohiny. Notohizanao ny teninao ary nangataka ahy ianao raha afaka handeha chambre d'hotel isika io atoandro io. Asa na ilay fomba filazanao na ilay invitation miampy politesse be fa dia hany teniko dia hoe "enao maditra fa tsy tiako" sady nokapohiko kely moramora ny tananao. Saika nahodinao niverina ho any am-piasana ny fiara fa izaho indray no niteny hoe "in'na ary ty ! zao ve de hiverina any sahady nefa ny sakafo aza tsy mbola lany ?" Notohizanao ny dia ary naka chambre d'hotel iray tsy lavitra teo isika.
Vao nikatona ny varavaran'ny chambre dia napetraka teo ambony latabatra ireo sakafo dia ilay orokao no nitsena ahy, novaliako ary toy ireny mpisipa vao niaraka ireny isika, nifampisafosafo, nifanoroka be. HItako tsy maika anefa ianao hanala ny akanjoko kanefa izaho tena tsoriko fa efa maika ny horasinao an-tanana hanaovanao izay tianao hatao.
Noesorinao tsikelikely ny akanjo amboniko, ny jupe-ko. mbola naka fotoana ianao nanantona azy teo @ dossier an'ilay seza. Nalanao ny soutien-ko ary nanomboke noesoriko koa ny lobakao, novahako ny ceinture-nao ary nampidiniko ilay patalohanao.
Efa samy en slip isika no notarihinao aho handeha hamonjy douche. teo no norohanao indray aho sady noesorinao moramora ilay lamba kely sisa tety an-koditro. Noesoriko malaky koa ny anao fa maika ery aho hahita izato fitaovana hoentinao mamalifaly ahy. Naka douche isika sady mbola nifampandro no nifampisafosafo. renao fa mando be teo anelaekela-pe-ko. Tsy noho ny rano nandroana fa ilay rano avy ao anatiko. Ny fitaovanao kosa hitako nihenjana be ary toe efa nijalijaly ela hatreny ambony fiara raha vantany vao nandà tsy hiverina tany am-piasana aho.
Niverina namonjy fandriana isika ary tsy nifafa t@ serviette akory fa avy dia nolemantsika t@ vatantsika mando ny drap dia nanomboka teo ny fitiavana ara-nofo niraisan'ny fitaovam-pananahantsika (sa fitaovam-pifaliana ???)
Adino tery ambony latabatra ilay hamburger sy coca ka efa teny an-dalana hiverina tany am-piasana vao nohanina
Tsy nety adinoko io voaloham-piraisantsika io. NItohy isan-kerinandro io fihaonantsika io, nisy fotoana in-3 isan-kerinandro, na atoandro na hariva avy miasa.
Ny asanay moa matetika misy fivoriana isan-kerinandro farafahakeliny efa prévu ary efa mahazatra ny vadiko izaho aterin'ilay tale-nay izay vehivavy saingy nisy fotoana foana ny fivoriana satria manana rdv ny tale-nay dia izaho indray no mandefa SMS aminao hoe sao afaka mifankahita androany hariva ? Efa azonao ny tiako hambara dia efa mamandrika chambre indray ianao hiarahantsika migoka fitiavana nangalarina.
Nandeha ny volana, nifindra trano ny orinasa niasan'ny vadiko ary lasa iray immeuble aminay. Mbola nitohy ihany anefa ny SMS mambabo fanaonao ary indray mandeha tapa-kevitra aho hanajanona ny fiarahana. Nifanao fotoana isika fa hoe hamonjy chambre indray ny hariva. Ny vadiko t@ izay nanana fivoriana tany @ ville ka tonga dia mody rehef avy any fa tsy maka ahy. Tsy nahavita nanao reservation ianao fa nikasa hamonjy chambre iray izay tsy mbola nandehanantsika. ILay izy anefa tena hita be daholo izay miditra sy mivoaka ao ka tsy nety tamiko. Tsy misy parking, tsy misy fefy....
Lasa indray isika nitady chambre iray hafa ka nahita mifefy tamboho tsara, misy vavahady, chambre classe be, hotel 3 étoiles izay azoko antoka fa nuitée no nanofanao azy. Asa ohatrinona no nanofanao azy fa ny tao an-tsaiko kosa dia izao hoe "tsy maintsy voateniko androany hoe aleo a@ izay hajanona sao mampidi-doza"
Babon'ilay romantisme teo indray aho kanefa ianao hitako somary hendratrendratra, asa noho ny hofan'ilay chambre ve sa ...? tsy haiko sady tsy tiako hofantarina akory.
Nifankatia be tao indray isika saingy toa vetivaty ihany dia vita fa tsy toy ny nahazatra; Asa inona no antony. Tsy voateniko ilay nokasaiko hotenenina.
NItohy ny sms isan'andro ary indray mandeha tonga toy ny mahazatra ianao haka ahy ny atoandro fa izaho no nandà namorona asa maika tsy hahafahako mivoaka. Ni-proposer fotoana hafa ianao fa nahodinkodiko ny resaka. Tsapanao angamba fa tsy te-hanohy aho dia tsy ni-insiste intsony ianao. Nitohy tsy nisy niova anefa ny fifandraisantsika @ maha-mpivarotra sy mpividy antsika.
Aty an-tany lavitra aho izao miaraka @ vady aman-janako mahatsiaro ireo fotoana niarahana taminao. Nahafinaritra @ ankapobeny na dia nampatahotra aza t@ voalohany. Tsy nanenenako fa nahitako fiainana hafa nahafinaritra kanefa nampametra-panontaniana hoe "resaka sexe fotsiny ve sa tena nisy fitiavana ?" taty amiko aloha nanomboka nitsiry be ny fitiavana t@ io fotoana niraisantsika farany io... asa ny tany aminao na fitiavana na resaka ara-nofo fotsiny ihany.
Any ianao izay ry Y...
andorb - 17/07/2018 19:33
mirananirina - 21/07/2018 15:46
Hihihi tantara koa izany anareo izany. Fa hono hoa maninona tantaraina eto? Sa eto ihany koa ilay sipanao t@ izany ka mety mahita ity? Na izany na tsy izany dia tsy misy hanomezana tsiny fa samy manana fiainany.
Felantsoa14 - 23/07/2018 01:57
... Fa hono hoa maninona tantaraina eto? Sa eto ihany koa ilay sipanao t@ izany ka mety mahita ity? ....
Tsy mahalala ity site ity na ny vadiko na ilay sipako taloha, kanefa ilay sipako mety mahita ihany. Ho hita eo fa hamaly izy ary hahafantatra ilay tantara raha mahita an'ity. Mba nahatsiaro azy aho dia niverina tao an-tsaiko daholo ny nitranga rehetra t@ izany. Mbola lasa saina ihany aho hatr@ izao manonteny tena hoe "nahavita an'izany ve ity izaho ? Nahavita nitia olon-kafa, nahavita niray t@ olon-kafa".
Tantaraiko izy satria fantatro koa fa maro no mankafy izarana tantara toy izao, maro no miaina azy saingy tsy mitantara, izaho kosa aleoko mivoaka ilay tantara mba tsy ho ahy irery. Anjaran'izay mitsara no mitsara raha tiany fa izaho kosa je l'assume. Tsy misy nenina na iray minitra aza
Bizarrement, hitako tena nanomboka latsapaka tato amiko ny fitiavana azy t@ izay farany izay ary mety mbola misy kely hatr@ izao angamba matoa nahavita nitantara teto aho saingy efa nahavita dingana tsy niverina intsony dia fahatsiarovana sisa.
Hoy ilay mpiara-miasa amiko taloha izay fony mbola tsy niala Dago izahay : "Raha misy scanner angamba akia ny olombelona ka tonga dia hita daholo izay miserana ao anaty lohan-dri ao angamba efa ela no nisaraka t@ vadiko aho. Izy koa manko nisy fotoana toa ahy ary tena nivaky tamiko mihitsy izy hoe depuis niarahany t@ io lehilahy hafa io dia niha-tsara ny firaisany t@ vadiny satria matetika dia any @ ilay lehilahy sipa ny foana ny sainy rehefa miray @ vadiny izy.
Izaho kosa aloha tsy tonga t@ io mieritreritra ilay iray hafa io fa faly fotsiny niaina fiainana hafa, natsiro, nampatahotra, nahalasa eritreritra.
Fintiniko @ ity hira ity ny fiainako niaraka t@ io sipako io
mirananirina - 23/07/2018 15:24
Matoa tokoa aloha mbola ao antsainao foana tantaranareo dia mbola tinao ilay sipanao e! Nefa raha amiko dia tsara ihany koa mamafa ny lasa mba ahafahana miroso @ fiainana vaovao indray. Hafa indray izay hoe miray @ olona ianao nefa olona hafa no ao antsainao hihi azafady fa nihomehy kely aho.
Ny mampalahelo kely @ ilay tantaranao fotsiny dia hoe: ilay olona koa ve mbola tia anao tahaka hitiavanao azy?
Haby - 24/07/2018 09:17
" Le coeur d'une femme est un ocean plein de secret et de mystère"
Felantsoa14 - 25/07/2018 02:15
Hahaha, ity indray no tsy haiko. Tena marina
Felantsoa14 - 25/07/2018 02:23
Matoa tokoa aloha mbola ao antsainao foana tantaranareo dia mbola tinao ilay sipanao e! Nefa raha amiko dia tsara ihany koa mamafa ny lasa mba ahafahana miroso @ fiainana vaovao indray.
Ilay izy aloha ho antsika vehivavy (izay fantatro) misy fitiavana na dia kely ihany aza ao anaty matoa nanaiky hanoroka sy hanao @ ilay lehilahy. Ny lehilahy indray toa ara-nofo aloha vao mety mitsiry ny fitiavana. Tsy mampalahelo ahy ilay hoe mety tsy tena ho tia ahy izy satria efa fantatra fa tsy haharitra ela ny fiarahana satria samy tsy mieritreritra ny hisaraka @ vadinay avy izahay. Tsy nisy resaka an'izany akory ny tena marina eh. On n'a jamais parlé des autres personnes de chaque côté. Tsy izaho koa no hitantara aminy izay fiainako @ vadiko.
amin'izao fotoana izao izahay mivady dia mikasa hanao vacances any Madagasikara ary efa planifié mihitsy ilay séjour hoe hasiana fotoana hiarahana @ fianakaviana fa hisy fotoana hiarahana @ namanay avy (mpiara-miasa aminy taloha, mpiara-miasa amiko taloha) ka samy hanana ny làlany. Ny atahorako tsy hahazaka tsy hampilaza @ ilay ex-ko aho hoe tonga any Dago ka raha izay no hitranga dia inoako marina tokoa fa hanao izay hihaonana amiko izy ka eo no ho raharaha raha tsy hahatanty ny hiresaka fotsiny aho na hiroso zavatra hafa indray.
Tena marina fa matoa aho nahatsiaro azy teto dia mbola nisy fitiavana fa tena fitiavana ve ? asa.... izy koa ve mba mahatsiaro ? asa koa satria ny lehilahy koa tsy misy kilometrage.....
Hents86 - 02/03/2019 13:51
itako tena tinao mihints io tantaranao io satria indroa zao no nahitako io tantara io. Ilay iray izay natombokao t@ resakao sy ramose oe mb mila mitady experienc na fiainana enao ... Ny teo ampovoany ts niova ... Nofarananao t@oe notantaraiko t@vadiko d ho izy: tiko b zao rah zah no nahita zany nataonareo zany dia nofarananareo t@ aranofo. Nanimba anao ihany fa tsara satri ts tokony ananjo ity olona tsony enao @maha vhvav anao
Felantsoa14 - 04/03/2019 17:18
---- Nanimba anao ihany fa tsara satri ts tokony ananjo ity olona tsony enao @maha vhvav anao
Tsy azoko ity resakao farany ity. Fa maninona aho no tsy tokony hanan-jo hitia intsony ? fa ny lehilahy mampirafy eran'ny tanana moa tsy toy izany koa ?
Tsy azoko mihitsy ny olona (Malagasy) fa raha vao ny vehivavy no mamoaka zavatra toy izao dia voaenjika hatrany fa ny lehilahy voadokadoka.
Aty @ firenena misy ahy na lahy enao na vavy tsy misy manenjika anao @ izay hiainanao ny sexualité-nao sy ny fitiavanao.
tena tsy azoko ny olombelona malagasy an